Usoro, Ikike na ikike | Martech Zone
Monday, March 16, 2009 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
M na-agụ Web Design magazine (amamiihe magazine!) Na overheard ngalaba bụ:
Otu ụlọ ọrụ nke mmemme na-ewepụta koodu. Otu ụlọ ọrụ ndị njikwa na-ewepụta nzukọ. Tweet site n'aka Greg Knauss, Onye Mmemme.
O mere ka m chee echiche banyere mmalite. Dị ka mmalite si agbanwe, echere m na e nwere ọtụtụ ụdị ndị ọrụ na-abịa:
Buru ụzọ mee ndị na-eme ihe. Ha na-eme ihe, n'agbanyeghị.
Mgbe ahụ, ndị isi abịa. Ha na-enyere ndị na-eme ihe aka na-eduzi ma na-enyere aka na-akpali ụlọ ọrụ na-eduzi.
Mgbe ahụ bịa ndị njikwa. Ha na-akụnye usoro, ikike na ikike.
Nzọụkwụ 3 bụ usoro na-emebi. Ebumnuche nke usoro, ikikere na ikike bụ iji hụ na nchekwa na nchekwa. Agbanyeghị, mgbe ọ na-akpaghasị okike na ụzọ nke ụlọ ọrụ na-eto eto, ọ ga-eli ya. Ahụla m nke a na mbido ọ bụla m rụrụ ọrụ na ya.
Inye akwukwo agba na ihe ichoro artist na ịgwa ha ka ha nọrọ n’ahịrị bụ ụzọ e ji n’aka iji wee hụ na ị gaghị enweta mpempe akwụkwọ dị oke ọnụ ahịa.
Tags: akwalite akaụntụ twittermkpebivideo ogbako
Isi ọrụ nke njikwa abụghị ịchịkwa mana iji mee ka. Mgbe òtù dị iche iche bidoro ilekwasị anya na ịmachi ihe ndị mmadụ nwere ike ime karịa ịnabata ikike ndị mmadụ nwere imepụta, ị ga - amalite inwe nnukwu nsogbu.
N’atughi obi uto, otutu ndi oru anabataghi uche nke oru choro ichoputa ka onye ozo gha aru oru. N'ezie, nnukwu ndị njikwa bụ ndị wepụ ụzọ na-arụ ọrụ ka ndị nwere ọgụgụ isi nọ na nzukọ ahụ nwee ike igosipụta amamihe ha kama ịlụ ọgụ na sistemụ.
Anyị kpuchie ihe na-eme ndị ọrụ n'okpuru njikwa mmegbu ọnwa gara aga maka mbipụta Superbowl Ad nke Usoro Blog. Lee akụkọ a na:
Amen, Robby! Ọtụtụ ndị njikwa kwenyere na ọ bụ ọrụ ha 'imeziwanye' ndị ọrụ kama 'nyere' ndị ọrụ aka. M na mgbe nwere ndị mmadụ ụgwọ m dị ka 'mfe boss', ma m na-mgbe gafere ọ bụla na-atụ anya mgbe e nyere ohere.